Semalt: Fake Site Visitors uye Kuti Ungagadzirisa Sei Navo?
Vese webmasters vanoshandisa Google Analytics kutevera vashandi vepawebsite. Ivan Konovalov, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anoti kana iwe ukacherechedza zvinyorwa mukushanyira mubhuku rako reGoogle Analytics, mikana ndeyokuti referrer spam yakatora nzvimbo yako. Mabhuku matsva nemaBloggi anogamuchira kubva ku50 kusvika ku100 kushanyira pazuva, uye kana zviitiko zvichiratidza kushanya kwemasvondo mazana maviri nemazuva masere pasina SEO yakakodzera, iwe unofanirwa kuziva dambudziko uye edza kuwana mhinduro yacho - private ssl certificates.
Pfungwa yako yekutanga ichava "kufamba kwangu zvishoma nezvishoma kuchikwira." Paunenge uchichera mifananidzo iyoyo, uchaona kuti referrer spam iri kukugadzira nyota yako panzvimbo yako zvinyarara.
Vaenzi vakabva kupi?
Mazhinji emawebsite nemabloggi anogamuchira zvitsva kubva kunzvimbo dzekutsvaga uye nzvimbo dzekugarisana. Vamwe ve webmasters vanosarudza kuendesa mberi, uye hutano hwemasayiti akatumirwa hunogona kuwanikwa muNzira Dzenyu dzeGoogle Analytics account. Kana ukanyatsocherechedza, iwe uchasvika pakuziva kuti kutumira kunokwira zuva roga roga uye kuwedzerwa kutsvaga hazvina kunaka panzvimbo yako. Kuva nehutano kubva pahutsika hwepamusoro kana kuti mawebhusayithi evanhu vakuru chiratidzo chokuti webhusaiti yako iri pangozi. Kune vamwe, kuwedzerwa kukurudzira chinhu chakanaka, asi hachisi chaicho.
Ndiani ari kusangana newebsite yangu?
Enda kune chikamu chekufambisa kuti uone nhamba yezvivako zvakange zvichikutumira iwe kutumira motokari kwemazuva. Iwe zvichida unoona free-social-buttons.com, darodar.com, 4webmasters.org, uye sanjosestartups.com munzvimbo ino. Kana iweGoogle mawebsite aya, uchaona kuti ivo vanonyanya kutumira spammers uye vachiramba vachikutumirai zvinyorwa zvisina kururama zuva rega rega. Zvinoreva kuti magwagwa anobva kune aya ekutsvaga nzvimbo haisi chinhu chinopfuura marwadzo kwauri.
Referrer spam ndiyo chikumbiro chakaipa chakatumirwa kunzvimbo yako ne script iyo spoofs HTTP yako. Mutauri weHTTP chikamu chezivo chakapfuura nemusikana kana iwe uchibva pane imwe webhusaiti kune imwe. Mhando dzisina kufara dzichaisa HTTP yako yekutsvaga pawebsite dze spam dzavanenge dzichida kukurudzira paIndaneti. Kana iwe uine hanya nehuwandu hwehitsotsi yako inogamuchirwa kana kuti kuchitsva pazvibatanidza, haufaniri kumhanyira mawebsite.
Nei referrer spam iri ngozi?
Mamwe mawebsite anobudisa zvinyorwa zvekutumira uye anotarisa kune dzimwe nhema dzinobatsira kune spammers. Apo data iri kubudiswa paIndaneti, spammers vanosimudzira mapeji avo ewebhu. Zvinotaridzika sokuti injini yekutsvaga inokwidza mawebsite kana mabloggi nyore nyore, ichifunga kuti yakarurama. The referrer spam ine ngozi nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
Inogona kukonzera account yako yeGoogle Analytics, uye nhamba yekushanyira inogara ichigadziriswa;
Izvo zvinoita kuti zvisingakwanisi kutarisa kuti vangani vashanyi chaivo vataiva navo panzvimbo yedu;
Inowedzera kubhadhara kwemazana kusvika ku100%, uye nguva yemisangano inogara iripo nguva dzose (0:00:00;
Google nedzimwe injini dzekutsvaga dzinoziva zvinhu izvi uye zvinogona kuderedza nzvimbo yako yekutsvaga mumazuva anotevera. Ndokusaka referrer spam kushanyira zvishoma nezvishoma kune webmasters. Iwe unofanirwa kutora matanho akakomba kune mawebsite akanganisa usati wanyanyisa uye bhizinesi rako rakaparadzwa paInternet.